IAmerican stock market iri kutarisira downtrend? | Ehupfumi Zvemari
Mushure memwedzi yakawanda uye yakawanda kwazvo yekukanganiswa kukwira, misika yemari yeUnited States iri kupa zviratidzo zvekutanga zvekuti mamiriro ezvinhu aya anogona kunge apfuura. Mupfungwa iyi, hapana vashoma vanoongorora zvemari vanotenda kuti pane zvishoma zvishoma zvasara kuti vaende kunzvimbo pfupi muAmerican S&P 500 index.Uye zvakare, kumisikidza bhenji yekusiya uyu musika wezvemari uye kuti uchaverengerwa pamatanho padhuze ne 2.700 points chingave chiratidzo chekutanga kutengesa.
Imwe yekutorerwa kweshanduko mune zvinoitika muequities kungave kukanganisa kwayo pa masheya indices kune rimwe divi reAtlantic uye kuti varimi vanobva kukondinendi yakare vanogona kuunza kurasikirwa kweimwe ether kusimba. Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, hapana sarudzo asi ita nekungwarira kukuru uye pamusoro pezvose zvine musoro uye kunyangwe hazvo mwedzi waMbudzi naDecember setsika kwazvo vatengi. Iko iko kumirira kwenguva refu kwakamirirwa kwemhemberero dzeKisimusi kunoita.
Chero zvazvingaitika, kukwira kwechikwereti chemari pachikamu che Federal Reserve yeUnited States (FED) inogona kutungamira kune aya matsva anonetsa mamiriro emisika yemari. Kunyanya kana huwandu hwechikwereti hukwira nekuwedzera kwakasimba kupfuura zvakafanotaurwa nevanoongorora zvemari. Panyaya iyi, kurasikirwa kwacho kunogona kukwidziridzwa kubva panguva chaidzo idzi. Hazvishamise kuti iri njodzi yaunofanira kutarisira kana uchizosarudza kutenga masheya pamusika wemari munguva yakaoma zvikuru seiyi iriko.
1 Bearish muitiro mumatanda
2 S & P 500 Yazvino Chiitiko
3 Tsananguro dzinopokana dzaTrump
4 Kutanga kuderera kwemusika wemasheya
5 Nhoroondo yemusika weUSA
6 Masheya ane madonhwe makuru muUS
Bearish muitiro mumatanda
Chimwe chezvishamiso zvikuru mumavhiki apfuura ndechekuti huwandu mumisika yeUS vari kurasikirwa zvakanyanya mukukoshesa kwavo. Kusvika pakuti tengesa zvinzvimbo Vavaki vemari vari kuzvimanikidza nekristaro yakajeka kujekesa kune vatengi. Iko, kuongororwa kwakadzika muchikamu chetekinoroji kunogona kubatsira kuwana chimwe chezvikonzero zvikuru zvekudzikira kwazvino mumisika yemari yeUnited States. Izvo zvinoitika mumazuva mashoma anotevera zvichave zvakakosha kusarudza pakupedzisira kana iri nguva yekutenga kana kutengesa zvinzvimbo pamusika wekutengesa.
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa kuti zviyero munzvimbo ino yenzvimbo zvakakwira zvakaringana kweanopfuura makore mashanu uye gore gore. Maitiro aya anogona kunge asvika kumagumo uye hunhu huchave hwakakumikidzwa kubva zvino zvichienda mberi Seta mutengo yezvavanoita. Parizvino hazvigoneke kusarudza kuti zviri kuitika mazuva ano ingori gadziriso yemastock indices kana kupokana iri kufamba kunonyanya kunetsekana nezvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
S & P 500 Yazvino Chiitiko
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chete chinogona kubatsira vatengesi kuita sarudzo neimwe nzira kana imwe. Icho hachisi chimwe kunze kweS & P 500 yatanga musangano wakakura wekupedzisira unogona kugara mukati me2019. Kunyangwe shanduko huru mumafambiro inogona zvakare kuitika kana zvimwe zvezvitsigiro zvakakosha zveiyi musika wekukosha wakakoromorwa. Kusvika padanho rekuti sarudzo inonzwisisika zvakanyanya ichave tengesa kana mirira, zvinoenderana nemamiriro ekuita kwako pane ino stock exchange muUnited States.
Kune rimwe divi, kudzikira kwakakosha mu China kukura kwehupfumi uye nyika dzichiri kusimukira, idzo dzinodzorawo kukura kweupfumi hweGerman uye, nekudaro, iyo yeEurope, nemisika yayo yemasheya inogona kumanikidza maficha eakasiyana emusika weAmerican stock. Iko kunotarisirwa kune iyo S & P 500 kuti avhareji yemari pachikamu chemakambani akanyorwa ichadzikira kusvika pamatanho zvishoma kupfuura 23% mu2018, kubva ku6% muna 2019 uye zvirinani muna 2020, iyo ingangove iri pa4%. Icho chiitiko, mune chero mamiriro ezvinhu, icho chingave chakanyanya kuomarara kushanda neaya mare emari.
Tsananguro dzinopokana dzaTrump
Mutungamiri weUnited States, VaDonald Trump, vataura nezvekuwa uku mumisika yeAmerica. Uye tsananguro yake yaigona kunge isina kupokana kune vakasiyana vemari vamiririri. Tsananguro yake ndeyekuti kufamba uku kwakatangira semhedzisiro yemhedzisiro yesarudzo dzichangoburwa ku Congress of Deputies neSeneti uye izvo zvakaunza kuvapo kukuru kwevezvematongerwo enyika veDemocratic kune yekutanga dzimba dzekumiririra nyika ino ine simba.
Ehezve, izvi zvikonzero hazvinyatso kutsanangurika kana zuva rakatevera izvi zvabuda kuzivikanwa, misika yemakambani yakavakwazisa nezviwanikwa zvakakosha. Asi, izvo zvinokonzeresa zvinofanirwa kuwanikwa mune tsananguro dzinotorwa kubva kumisika yemari pachavo. Kunyanya izvo zvakabatana ne kuneta zvakanyanya nemaUS stock exchange. Zvino izvo zvichazodiwa kuti uone kana izvi zviri kuitika chiri chimwe chinhu chinopfuura kururamisa mumutengo wemasevha.
Kutanga kuderera kwemusika wemasheya
Ramba uchifunga kuti S & P 500 yakatanga svondo ichidarika nechikamu chekugadzirisa chekumuka kwakapfuura, kwakagadziriswa nenhanho kubva pamazana maviri nemazana matanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu. Iyo yeAmerican tekinoroji chikamu chiri kuratidza chikuru chiratidzo chekushaya simba nekunongedzera kumadonhwe ayo makuru mumwedzi yakawanda. Ichi chiratidzo chakasimba kwazvo nezve zvinogona kuitika mumazuva mashoma kana mavhiki anotevera. Kwete pasina, iyo Nasdaq 1000 inofungidzira mafambiro emunguva yemberi echinyakare indices, sezvakaitika mumakore achangopfuura.
Rimwe remazano akajairika kubva kune vanoongorora zvemari ane mukurumbira nderekuti nepo S&P 500 ichiramba iri pazasi pe2.800, chinzvimbo chinobatsira zvikuru chichava mukushomeka nekuda kwekudzikira kwemisika iyi kune rimwe divi reAtlantic. Naizvozvo, idzi inguva dzakakomba dzekuratidza kuti ndeipi tsika inozopedzisira yabuda pane izvi zvese yekugadzirisa kana yekutenderera nzira. Iko sarudzo dzemari dzinogona zvakare kuita diki yavo kusarudza imwe kana imwe maitiro kubva zvino zvichienda mberi.
Nhoroondo yemusika weUSA
Iko United States misika yemusika yakagadzira imwe yenguva dzakanakisa dzekuwedzera munhoroondo yayo uye izvo zvakatungamira kune vanoisa mari mari kuwana mibairo kunyange padyo padyo ne100%. Iko iko kuongororwa kweakanyanya kukoshesa indekisi yemusika uno wakakodzera, iyo Standard neVarombo mazana mashanu yakaratidza kukwira pamusoro pe500% kubvira 200. Mune izvo zvinoonekwa se yakareba kumuka nguva yemitengo yezvikamu munzvimbo ino. Zvakanaka pamusoro pezvikwiriso zvinoratidzwa neese stock stock exchange yekondinendi yekare.
Mune imwe tsinga, kusiyana pakati pemakesi emasheya eAmerican neSpanish kuri pachena. Saka kugona kwayo kwekudzikira mumusika wemasheya kuri pachena zvakanyanya, ne gadziriso dzakadzama, zvese maererano nehukuru hwayo uye munguva inogona kugara kubva panguva dzino. Chero zvazvingaitika, inguva yekushomeka kukuru kubva pakatanga uptrend uye inogona kutungamira kuchinjo yakadzama muitiro kupfuura zvakafanotaurwa nevamwe vevanonyanya kuongorora misika yevatengesi.
Masheya ane madonhwe makuru muUS
Vhiki raigona kunge risina kutanga zvakanyanya kumisika yemari yeUS. Hazvishamisi kuti Wall Street yatanga svondo nekurasikirwa kukuru, inotungamirwa nateedzana emakambani akakosha kukosha, senge Apple, Amazon, Goldman Sachs uye General Electric. Uku kwave kuri kuwedzera kwekudzikira uku kwakadzikira Dow Jones 2,3%, nepo zvichipesana, iyo S & P 500 yakadzikira pamatanho e2%. Iyo tekinoroji indekisi par kugona yakawedzera zvakanyanya, iyo yakadzikira neinenge 3%.
Kana kudzikisira kwakasimba kunotambura neimwe yeakanyanya kuenzana muUnited States kukanganwirwa. Iyi ndiyo kesi yeGoldman Sachs masheya anga ave akasiya anenge 8% uye kusvika pamatanho akafanana chaizvo neaya a2016.Panyaya iyi, yakakwidziridzwa neanofungidzirwa chiokomuhomwe kuMalaysia avo vakatora kukosha kwavo pakukoshesa mumisika yemari.
Chokwadi chinogona kusvibisa kumwe kuchengetedzwa muchikamu mumazuva anotevera uye kunyangwe zvinongedzo zvemusika wemasheya mune ino kondinendi. Nemaonero ari akaipa kwazvo kune vanhu vanoda kuisa mari yavo mukuchengetedza. Nemhedzisiro yakaipa kwazvo pamusika wemangwana wemisika yeAsia, iyo inosimbisa kudonha kwavo nekusimba kukuru. Iko sarudzo dzemari dzinogona zvakare kuita diki yavo kusarudza imwe kana imwe maitiro kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » IAmerican stock market iri kutarisira downtrend?